အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: မထင်မှတ်ပဲ တွေ့ရှိချက်၊
စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကိုအသားပေးဖေါ်ထုတ်ပြီး.
တစ်ချို့အပြောတွေက.. ၈၈ အရေးအခင်းမှာ..
အထက်က အရာရှိမင်းများစွာက ခွေးသာသာ..ထားတာတွေ..၊
ဇတ်တူသားစားတာတွေကို ..တိတိကျကျလေး ဖေါ်ထုတ်ရေးသားပေးပါ၊
နီးစပ်ရာတပ်တစ်တပ်ထဲ ၀င်ပြီး လုပ်ရင်တောင်ရပါတယ်..
(ဒါတောင် စစ်အာဏာရှင်တွေက သန်း ၆၀ သော.
ဒါပေမဲ့ လက်နက်မကိုင်တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို.
အမိန့်နာခံသူတို့ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ စရိုက်..ကိုမပြောသေးဘူးနော်.၊
မင်းမဲ့ စရိုက်ဆ်တာကို ဟိုက်လိုက်လုပ်နေလွန်းတော့လဲ
(၁) ရိုးရိုးသားသာဆန္ဒပြတာကိုမှ.တမင်ကို မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်သွားအောင်လို့..
MI (Military Intelligence) လို..လှို့ဝှက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက
(၂) ဒါမှမဟုတ်.MI ရဲ့ ဆဲလ်တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်မ၀င်ပဲ.
(ဖွဘုတ်မှာ အခုပြန့်နေတဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီးခင်ညွှန့်လက်မှတ်နဲ့..
ဒေါ်စုကို အင်အားကြီးမားစွာနဲ့. ပက်ပက်စက်စက်လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားကြတယ်..၊
ပြီးတော့ သူတို့ကအရင် ဒေါ်စုဘက်ကအလွန်ပုံစံမျိုး
အဲဒီမှာ သူတို့ ဆဲလ်တွေရဲ့ စနစ်ကျတဲ့.လုပ်ကွက်တွေကို..
ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို အသားလွတ် မြေတောင်မြှောက်လာတယ်.၊
အဓိကက စစ်အာဏာရှင်ကို ထောက်ခံသူတွေဖြစ်နေတယ်..၊
သံဃာတွေကို အရင်ကမုန်းတဲ့သူတွေကလဲ သူတို့ဖြစ်ခဲ့ပြီး.
အဲဒီလို.. မြို့တွေ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ခဲ့တဲ့
သူတို့ ဆဲလ်တွေရဲ့ သပ်ရပ်တဲ့..လှုံဆော်မှုတွေ၊
ဒီလို Plan မျိုးတွေလုပ်နေကျဟာ..ဘယ်သူ..၊
အဲဒီတော့ အခုဖြစ်စဉ်( ၂) ခုကိုကြည့်တာနဲ့တင်.၊
၈၈ အရေးအခင်းတုန်းက မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်အောင်..
တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အကြမ်းဖျဉ်း.
ဆောင်ရွက်ချက်တွေ နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတာတွေကို..
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:00 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook